Home > अन्तरवार्ता > स्कूल विभागको निर्णय बहुमत र अल्पमत बाट गरौँ-भीम रावल
निडर, निर्भिक छवि बनाएका र पार्टी एवं सरकारका कामकारवाहीबारे आलोचनात्मक चेत राखेर खरो प्रतिक्रिया दिनुहुने नेकपाका नेता भीम रावलपछिल्ला घटना क्रमहरु बारे के भन्नुहुन्छ ?
केन्द्रीय सदस्यकै कार्यविभाजन भयो भनेपछि…?
महत्त्व के विषयलाई दिनुपर्ने हो ? एकीकरणलाई कति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो ? त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरु कोेको जिम्मेवार हुनुहुन्छ ? … त्यतातिर ध्यान नदिएर आफ्ना निजत्वहरु कहाँ कसरी र पुरा हुन्छन् ? कसले कहाँ शक्तिआर्जन गर्ने ? यतातर्फ अलि बढी प्रवृत्त भएका कारणले एकीकरणमा विलम्ब भएको भन्ने मलाई लाग्छ ।
त्यस कारण मैले हाम्रो पार्टीको नीतिसँग, हाम्रो संविधानसँग पनि मिलेन भनेर टिप्पणी गर्ने गरेको छु । रातोपाटी
पूर्वउपसचिवको घरमा कसले हान्यो गोली ?
बीरगंजबासीलाई देउवाको बाचाः संविधान संशोधन गर्छु,‘एमाले मधेस विरोधी पार्टी हो
सरावगीलेले गरे प्रदेश नम्बर १ को पहिलो बैठकको अध्यक्षता